Iimpawu eziza kubonisa ukwehla kwintengiso yemasheya | Ezezimali
Olunye uloyiko kwicala labatyali zimali abancinci nabaphakathi okwangoku kukuba iimarike zezabelo zingangena kumgangatho ocacileyo wokuhla obeka utyalomali lwabo emngciphekweni. Sele zikhona ezinye iimpawu ezothusayo kwimeko entsha kwiimarike zezemali ezinokuthi zilindele ukwehla kweyona indices zesitokhwe ziphambili kwihlabathi liphela. Kodwa kwiimeko ezininzi, le nyani ayothusi kwaye akusenakwenzeka ukwenza nto. Ngaphandle kokuba sithathe ilahleko kwiphothifoliyo yezokhuseleko.
Le yimeko eye yenzeka kule minyaka idlulileyo kwaye ibonakalisiwe kwimbali yotyalo-mali nakwiimarike zezemali. Ngale ndlela, iCrac yama-29 ?? yayiyeyona ntlekele yentengiso yestokhwe kwimbali yentengiso yaseMelika, kuthathelwa ingqalelo ukufikelela kwihlabathi kunye nexesha elide emva kwayo. Ukuya kwinqanaba lokuba ivelise esele isaziwa njenge Intlekele ka-1929 ekwabizwa ngokuba kukudodobala okukhulu kwaye kukhokelele amawaka kunye namawaka abatyali mali ukuba babhengeze ngexesha elifutshane kakhulu.
Ukuze ungahlali kwizikhundla ezixhalabisayo, siza kukubonisa imiqondiso enokuveliswa kwiimarike zezemali malunga nokuvela komjelo ophantsi wobunzulu obukhulu kunye namandla. Ukuze ngale ndlela, ungasebenzisa ezona ndlela zibalaseleyo zoku ukunciphisa le meko intsha kwiimarike zezabelo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye kwanakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko zokhuselo ezidweliswe kwiimarike zezabelo.
1 Imarike yemasheya yaseMelika ilindele imeko
2 Ukwehla kwemilinganiselo xa kuvalwa
3 Ukwenziwa kophahla
4 Uhlalutyo: ukwehla konxantathu
5 Iingcebiso ngokuthengisa iimarike
6 Uhlalutyo lobugcisa nolusisiseko
Imarike yemasheya yaseMelika ilindele imeko
Ngokuphathelene noku, kufuneka kukhunjulwe ukuba kwiintsuku zokugqibela zokuthengisa, imarike yaseWall Street iyabandezeleka ekuvaleni okukhathaza kakhulu abasebenzisi bempahla, nokuba ilahleko ukuya kuthi ga ngaphezulu kwamanqaku ayi-1.000 XNUMX. Oku kuphazamiseka kubangelwe kukoyika kwabatyali mali okubabangele ukuba barhoxe kwimarike ngenxa yokoyika iziphumo ezibi zoqoqosho ezibangelwe kukwanda kwamazinga enzala kunye nokungqubana kwezorhwebo eUnited States ne China.
Kwelinye icala, ukuphazamiseka kwenzeka emva kosuku olunye emva Fund International Fund (IMF) isike uqikelelo lwayo lokukhula kwehlabathi ngenxa yenkxalabo malunga neemfazwe zorhwebo kunye nobuthathaka kwiimarike ezisakhulayo. Ke ngoko, akuyi kubakho khetho ngaphandle kokujonga kakhulu kwinto eyenzekayo kwimarike yokuqala ye-equity emhlabeni. Ayothusi into yokuba iphawuleka ngokulindela imeko yentengiso yesitokhwe kwihlabathi liphela ngandlela thile. Kungaphikiswa ukuba iimarike kwelinye icala leAtlantic zinempembelelo enkulu kwiimarike zamasheya zamanye amazwe.
Ukwehla kwemilinganiselo xa kuvalwa
Olunye uphawu olunokubonisa ukuba imeko ye-bearish iza kuthi kwiimarike ze-equity yile ibhekisa kwinto yokuba ukunciphisa okuncinci kuveliswa kwixabiso lokhuseleko, kumacandelo nakwii-indices zemarike yesitokhwe. Yi uphawu olomeleleyo kakhulu noluthembekileyo ukufumanisa ukuba sijamelene nokuthengisa ngokucacileyo okwangoku okunokuthatha ixabiso lezabelo ezisezantsi kakhulu kunangoku. Yinkqubo yokubhaqa yangoku esezantsi engaphezulu kwako konke enokuthenjwa kwaye sinokuyenza ngokhuseleko olupheleleyo.
Kwelinye icala, akukho mathandabuzo ukuba siyakufuna igrafu ukubona ngeso sihlandlo ukuvalwa kweveki nganye, eli lixesha apho uhlalutyo olubalulekileyo lweemarike zezabelo lunokucazululwa. Ayisiyo kuphela ekuthengweni nasekuthengisweni kwezabelo kwimarike yemasheya, kodwa nakwabanye, njengalezo zimelweyo izinto zokwenza imveliso, isinyithi ngqo, iimali ezibonakalayo kunye nayo nayiphi na iasethi eyimali edweliswe kwiimarike. Iya kunika eyona ndawo apho kuya kubakho ukuhlengahlengisa izikhundla kwiasethi yezemali ekhethwe ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngaphandle koloyiko lweempazamo okanye ukungahambelani kuhlalutyo lwakho. Ungayisebenzisa ngokuzithemba ngokupheleleyo kwezi zihlandlo zichanekileyo.
Ngaphakathi koluphi uhlalutyo lobuchwephesha kukho uthotho lwamanani anokusinika uphawu olungaqhelekanga lokuba ixabiso lezabelo liza kuwela kwiiseshoni ezilandelayo. Phakathi kwazo zonke, kukho enye ebaluleke ngokukodwa njengophahla oluphindwe kabini okanye kathathu. Kodwa ngaba oku kusethwa kuthetha ntoni kwimizobo? Ewe, iisilingi zombini eziphindwe kabini neziphindwe kathathu zihlala ziphakanyisiwe kwingcinga icala ijelo Ukuqhawulwa kwenkxaso kubeka ithagethi ye-bearish. Babizwa ngokuba ngamanani okuguqula imeko, ukunyusa ukuya kwi-bearish. Ziluncedo kakhulu kwaye kulula ukuziqonda kuzo zonke iiprofayili zabatyali mali.
Kwelinye icala, kukho omnye umzobo wokufaneleka okukhethekileyo onazo ezi zinto zinentsingiselo. Kule meko kungenxa yomfanekiso owaziwayo wegxalaba-intloko-yegxalaba. Kule meko ukulahleka kwenkxaso yomgca kubangela injongo ye-bearish ngamandla amakhulu. Ubuncinci baphuhliswe kwixesha elifutshane neliphakathi kwaye kwelinye icala kunokuthenjwa okukhulu ekuchongeni kuba kunqabile ukuba kuphosakele kwikhosi yokuba amaxabiso emarike yemasheya ahlalutyiweyo kubuchwephesha aza kuthatha.
Uhlalutyo: ukwehla konxantathu
Malunga ne Uhlalutyo lwetshathi enye yeemilo eziqhelekileyo ngoonxantathu. Ukuza kuthi ga ngoku ukuba bakho kuwo onke amaxabiso eentengiso ze-equity kwaye banokukunika elinye icebo malunga nokuba ungaluthintela phi utyalo-mali osele ulungiselele ukusuka kula maxesha kanye. Kuyo nayiphi na imeko, olu didi loonxantathu lungohlulwa lube ngamacandelo aliqela, nangona le sizakuyinyanga ibizwa ngokuba iyehla ngenxa yeempembelelo zayo ezicacileyo ze-bearish.
Ewe, unxantathu owehlayo ngulowo wenziwe ngumgca othe tyaba osebenza njengenkxaso kunye nesikhokelo se-bearish, ixabiso lenza ukunciphisa ubukhulu ngaphakathi koonxantathu. Ukuba kukho into eluhlobo lwe oonxantathu Yinto elula njengokuthi bathambekele ekuchitheni ixesha elininzi. Banokukunika inqaku ekubhekiswa kulo ukuze uhlengahlengise izikhundla kwiimarike ze-equity kwaye ngale ndlela ukwimeko engcono yokuqinisekisa ukusebenza kwakho kwimarike yemasheya. Ngaphandle kwezinye izinto zobugcisa
Iingcebiso ngokuthengisa iimarike
Ukuthenga okuhle kwiimarike zesitokhwe kuthetha ukuhamba umgama omde ukuze iziphumo ngohlobo lweenzuzo ezinkulu zingathathi ixesha elide ukufika. Kodwa ukuze oku kuchazwe ngolu hlobo, akusayi kubakho khetho ngaphandle kokuthatha uthotho lwezikhokelo kunye nezikhuselo. Ngenjongo yokuba i Ukuthatha isikhundla inokuba nobunzima kutyalo-mali lwethu kwixesha elizayo. Nangona ngexabiso lokuphuhlisa imeko ephezulu yexesha elingaphezulu okanye elingaphantsi.
Phambi kokuthatha isikhundla kukhuseleko, kuyacetyiswa ukuba ufunde ngobuchwephesha kunye nobalulekileyo. Ngayiphi na imeko, ungayishiyi kukhetho olukhethiweyo olunokuzisa kuphela iingxaki kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngokusisiseko kuba zinokuvela ngohlobo lwe Iziphene ezithintela ukuthengisa okuvulekileyo kwiimarike zokulingana. Lo ngomnye wemisebenzi ephambili ekufuneka siyigcinile kula maxesha achanekileyo nangaphezulu kokunye ukuqwalaselwa okungaphezulu.
Uhlalutyo lobugcisa nolusisiseko
Ukungena kumacandelo afanelekileyo kukwenza lula umsebenzi wokukhetha xa usakha iphothifoliyo, njengoko kunokwenzeka ukubamba ukuthengisa okuhle. Nokuba kukhethwe yiphi ukubheja, okoko idatha esisiseko yeenkampani ilungile. Ngale ndlela, elona nyathelo liluncedo kukudibanisa ngokuchanekileyo i- Uhlalutyo lobugcisa kunye nesiseko. Isebenza kakuhle kakhulu, njengoko abatyali mali abanamava ngakumbi kwiimarike zezabelo.
Kwelinye icala, asinakulibala nangaliphi na ixesha kuya kufuneka silibale ukungasebenzi kakuhle esinokukwenza kwelinye ixesha okanye kwelinye. Umzekelo, inyani yokuba kuyinto eqhelekileyo ukuba abatyali mali bangene imarike yemasheya ngaphandle kwexesha. Oko kukuthi, emva kokuba uninzi lwendalo esele yenziwe. Apho kungasayi kuba lelona xesha lilungileyo lokungena kwiimarike. Iya kuba yenye into ukungasebenzi kakuhle ekufuneka kulungisiwe ukufezekisa iinjongo ezibekwe ngabatyali mali abancinci nabaphakathi.
Ujongene nale meko, umtyali mali kufuneka aqhubeke nezikhokelo eziqinisekileyo zokuqhuba inkqubo yabo yokuthenga. Ngale ndlela, izikhokelo ezilula esisandula ukukunika kwaye ekulula kakhulu ukuzilandela, nditsho nakubatyali mali abaziingcali, zinokuba luncedo olukhulu. Kuba imalunga nokuphela kosuku ukwenza ukonga kunenzuzo ngaphezulu kwezinye izinto esizibonileyo kweli nqaku. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi ukusuka kwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Iimpawu eziza kubonisa ukwehla kwintengiso yemasheya